Version 0.9.3 – Xaggee ka calamada Dadkayga?
May 10, 2013 by dalabyo 40 Comments
Waxay aad u fog ma tegi, fadlan watch this video ama akhri tilmaamaha hoos ku qoran.
Maxay tahay inaad sameeyso si dib u heli?
Just Tahniyadaha nooca buuxa oo isticmaalaya tilmaamaha soo socda:
Hagaaji in ay qaybtii ugu danbeysey ka soo wordpress.org (taas oo noqon doona ugu dambeeyey ee, Ma jiraan)
Hubi “ogolaan in la tayogeliyo si version buuxa” goobaha ka
Iska hubi in casriyaynta iyo fulin Wareegtada ayaa, in dhammaan!
Maxaa cusub ee version 0.9.3:
Update shaqayn doona ka site
Ciidamada Kumandoska kutaan Qaar ka mid ah
Kartida in meesha laga saaro rel = beddelid kuwaas oo had iyo jeer ma wuxuu ahaa mid waxtar leh
(0.9.3.1) Waxaan sii daayay version a sub in ay ku daraan luqado cusub taageeray by Google, samaynta count our total – 73! (Haddii qof halkan ku hadla Hmong, fadlan nala soo xiriir)
Waxaan rajaynaynaa inaad doontaa raaxaysan version this.
Filed Under: Messages General Tagged Iyadoo: version buuxa, yaryar, sii daayo, video, wordpress.org
Estate Talyaani Real sheegay
Waxa aan calaamadeeyay sanduuqa "oggolaadaan hagaajinta si version buuxa" goobaha, laakiin aan ka arki kartaa meesha i Hubi for casriyaynta iyo fulin Wareegtada ayaa,
Aad fadlan sharax laga yaabaa
In sidemenu ee wordpress, waxaa jira “dashboard” ku xiga “updates”
mahad, u eg waxa ay ka shaqaynaysay.
taasi shaqayn doonaan haddii aan la isticmaalayo ee goobaha kala duwan?
Waxaan riixi update ee mid ka mid ah goobaha ay laakiin lama hayo meel in aan admin shabakad?
Thanks for your caawimo
May 24, 2013 at 7:50 at the
Miyaanan la tijaabiyaa, shaqeeyaan waa in.
Kiis Worst, download ku files plugin from here iyo casriyeyn ku bilawday:.
May 24, 2013 at 10:00 at the
Sidaas, sababta yeeleen update uun baan u yeeleen, dili calamada oo ku jira meesha ugu horeysa?
I ha u hesho. Waa maxay sababta aan lahaa borograam aad ka internetka ee hadda, kaas oo u malaynayeen inay ka shaqeeyaan ka soo bakhaar oo wordpress?
Coudl aad ka jawaabto sababta aad u dabreen dad galay this?
May 26, 2013 at 12:10 at the
Well, Aan soo jeedin post hore reading this iyo, Anigu uma aan qasbo qof inuu sameeyo wax, aad sameyn kartaa wax kasta oo aad rabto in aad ka soo halkaas oo weligaa aad rabto inaad.
June 12, 2013 at 1:19 at the
Waxaan u soo raacay umeerin, laakiin weli ma arkaan calamada kasta oo kor u socda… Ka caawi! 🙁
June 12, 2013 at 1:57 at the
Yaabeen – kaliya waxaa xallin. Baxay leedahay in aad dib ugu noqdaan widget dhabta ah iyo dooro ikhtiyaarka calanka DIB xariirta. Thanks!
November 22, 2016 at 11:07 at the
nin mahad, aad ku jawaabay i caawisay. Haa, ka dib markii la xariirta, aad leedahay si ay dib ugu noqdaan xogeedka>Muuqaalka>Widgets, ka dibna waxaad arki doontaa fursado badan calamada in uu soo bandhigo.
mahad iyo jacaylka ka Switzerland.
tagaan dib ugu widget dhabta??? Laakiin meesha?
Waxaan ku rakiban version ugu dambeeyey ee Transposh Plugin…9.3!
Waxaan u soo raacay caawimo video ah… laakiinse anigu uma aan ka heli kartaa meesha fursad calanka waa.
Waxaan jeclaan lahaa in la isticmaalo Calanka text halkii og(Magaca of Language).
Sidee baan ku dhigay karaa calamada sida default ? Halkee waa ikhtiyaar u leedahay in si dhigay??
Thanks ee advace – Ciro
June 28, 2013 at 12:08 at the
Just cusboonaysiiso si nooca buuxa.
Tan waxaan ku sameeyey! Laakiin in bogga u qaabeynta of plugin ku ma jiro wax dooran halkii calamada waa “ingiriisiga” – “Ruush” iwm (magaca luqadood ku).
Halkee waa badhanka si ay u dooran calamada?
Waxaan u isticmaali wordpress3.5.1
Marka aad doorato widget laga yaabaa in aad ka beddelin style, tani ma aha in fursadaha plugin, laakiin in ka muuqday widget gaar ah, isku meel aad ka bedelan karto badahsay, iwm.
Thanks… waxa ku qumman!
Anigu ma arag xulista aagga widget.
August 13, 2013 at 10:26 at the
Kaliya waxaan updated si WordPress 3.6 Qadaadka iyo reer on turjumaad screen ayaa gabi ahaanba la bedelay. Laakiin wax u xun waa in aan u ekaan kartaa in ay saxaan qoraalka wax ka mid ah qoraalka in laga turjumay. Aan ku sameeyey update Transposh in ay qaybtii ugu danbeysey oo sidaasaan ku sameeyey ee “U ogolow in la tayogeliyo si version buuxa” taas oo ku sameeyeen saxda ah shaqada. Fadlan ii soo sheeg wixii aad samayn karto si aad u hesho ku saabsan shaqada turjumaad screen (qaba sanduuqyada yar orange iyo cagaar si guji :). Thanks!
Hello, Ayaan ku rakiban plugin oo ku dhammaataan ka shaqeeya Transposh. Dhibaatadu waxay ka timaaddaa marka aan si gallery u tegi iyo ayaan riix sawirka si aad u weynayn oo daaqada ka muuqata iyo degayaa mar kasta oo waxaan siin image soo socda u guurayaan iyo aad u badan, dhibsan iyo inelegant. Rakibidda photos Transposh hortiisa ka muuqan daaqad popup ah, laakiin waxa ma guurto qolka inay u soo guuraan photo xiga. Waxaan u maleynayaa doonaan qaar ka mid ah sharicga leh lightbox wp plugin ku 2. Sidee baan u hagaajin karaa dhibaatadan? Thanks!
Ma run ahaantii kaa caawini karaa haddii aysan ku siin url meesha ay dhibaatadu tahay la arki a
Waxa hada la arki
Hello, mar hore waa la arki karo content url. Thanks.
Aanan awoodin inaan u aragto Flag xitaa ka dib markii xariirta Plugin si ay version ku Latest. Ma i caawin kartaa in ay wax ka qaban ..?
Thanks in horay…
Hubi in aad dhigay style Widget sax ah ee submenu muuqaalka / widgets
Thanks in horay ...
Ma waxaa go'an.. Ka hor inta Cusboonaysiinta ayaan abadiga ah arkay xulista ee widget.. Authors Thanks… Plugin Awesome… Thanks badan oo
August 17, 2013 at 9:29 at the
My website uu hadda ku jiraa Cibraaniga (xaq u leedahay inaad af bidix) iyo waxaan jeclaan lahaa in dar US English sidoo. Dhibaatadu waxay tahay ka dib markii aan lagala soo bixi ka siib in, dhan guddi ay gacanta ku wordpress guuray Cibraaniga si Ingiriisi, iyo sidoo kale website-ka beddelay oo muuqashadeeduna (website-ka oo dhan helay toosiyaa bidix ee). Sidaas ayaan Degaaladii iyo naafo ka siib in. Anigu waxaan ahay cusub si ay wordpress iyo si saraaxad leh, ma waxaan ahay hubi waxa aan sidaas yeelin jiray waa maxay fursadaha ii? Waxaan ku arkay, umeerin qaar ka mid ah halkaas oo luqadood ku daray ahaayeen oo dhan bidix ilaa kuwa xaq, iyo waxba ma dhicin iyaga…
Fadlan iga caawin! 🙂
Aad ayaad u mahadsantahay in horay,
August 17, 2013 at 11:09 at the
Waa maxay waxa aad arkaynaa waa sababta oo ah Transposh waxaa la beddelo naqayna ku jireen sidii afkii,
Si taas loo hagaajin, fadlan dhigay Cibraaniga sida luqadda sida caadiga ah ee Transposh ama ka curyaamiyaa muujinta naqayna is-dhexgalka bulshada ee goobaha ka,
Xusuusnow cover hage hitchhiker ee.
Paul Thomson sheegay
Maxaad ka fog WordPress bakhaar guurto? Miyaad u baahantahay in Backlink ah si aad website ama waa this optional mudnaan / bixisay?
Moved iska sababtoo ah waxaan mar dambe u aamini karin,
Marna ha loo baahan yahay, weli looma baahna, dooran-out vs. waxay dooran-in (ama Code it out)
August 20, 2013 at 10:31 at the
Hello mar, Waxaan u soo qoray dhowr maalmood ka hor laakiin waxa aan wax jawaab ah ma weli. Raalli Por, cid og tahay sidii aan uga qaban karaa sameeyey sharicga ayaa i Guud ee plugin Transposh wp leh Lightbox2? Marka aad furto gallery photo a ayaanse ah iyo si degdeg ah cuusb ee, si aad u aragto in aad u tagtaa xagga hoose ee bogga soo. Tani waxay dhacdaa mar kasta oo waxaan siin si aad u aragto sawirka xiga, sii kordhaysa ee hoos ku guuro. Maxaa waxaa laga yaabaa in dhacaya? Waxaan ahay cusub si iyo ma kula tahay karaa waxa ay noqon kartaa qaladka.
Tani waxay dhacdaa kaliya ii isagoo plugin ayaa suurtogeliyey Transposh, photos marka aad dami eegi dhammaataan.
Su'aal kale oo aan qabto waa in gallery ku aadan in English iyo Catalan.
Xiro dhowr maalmood leh this iyo ayaan waasho. Raalli Por, qof iga caawisaa soo baxay?
First, waad ku mahadsan shaqo weyn ee aad ka dhigtay si ay u abuuraan plugin this.
Anigu waxaan leeyahay codsi yaryar : Sidee baan ku dari kartaa bilowga post kasta xukun ah oo luqada turjumay ?
Waxaan jeclaan lahaa in digo akhristayaasha in qoraalka soo socda ayaa lagu tarjumay by google ama Bing ama ….
Waad ku mahadsan tahay !
Eeg shortcodes ah (on http://trac.transposh.org) iyo isticmaasho code not_in ah, hubi in aad turjumi luqad default awood.
September 6, 2013 at 10:12 at the
wahou wahou ! In ka shaqeeya runtii weyn !
October 31, 2013 at 10:45 at the
Waxaan u geliso isku dayeen in ay full sida tilmaamaha. Laakiin anigu ma heeli karo update si ay kor u muujiyaan at dhan. Ma riixi “U ogolow in kor loogu to version buuxa” waana ka Korinay, laakiin update jirin showes ilaa. Miyaanay 0.9.3 version. Waan isku dayay in oo ka baxay gashid, days sugayay oo saacadaha. On and off batanka iyo sidaas on. Update No. Waxaan doonayaa in calamada ee ka shaqeeya! Sidoo kale turjumidda dambe ka shaqeeyaa waxay u muuqataa…
October 31, 2013 at 11:05 at the
Waxaa jira waa dhibaato in wordpress 3.7, keento isbeddel ah ee url update in aan la shiday ee geedi socodka update ka ah,
Waxaa jira laba xal:
1. version a 0.9.4 in la sii dayn doono inay ku wordpress.org kuwaas oo dib-u-suurtogelin doontaa in update ah
2. joogu u faylka download from here iyo fulin update ah
October 31, 2013 at 11:07 at the
OK. Thanks! Maleynayey inaan ahaa waalan ama smt! 😉
Fikrad kasta oo marka?
October 31, 2013 at 11:08 at the
Sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah (waxay u baahan yihiin in ay la sameeyo baaritaanno qaar ka mid ah ka hor sii daayo)
October 31, 2013 at 11:10 at the
Waayahay. Cool. Markaasaa mahad oo dhan shaqada aad on this! Wuxuu ka caawiyaa badan si ay u fududaato ii daabacaan iyo dadka kale u fahmaan!
December 10, 2013 at 10:06 at the
I waykan inay sameeyaan Wareegtada ayaa si version this sababtoo ah waxaan mooday in aan ka furo lahaa calamada oo dhan ama aan awoodin in ay doortaan luqado badan oo… Maxaa ka nacaska waxaan ahaa! Sida ugu of plugins users, Waxaan rumaysanahay in aanu kaliya Wanna heli wax bilaash ah iyo in had iyo jeer ka shaqeeya. Waxaan hambalyo Transposh for shuqulkii weynaa oo si igu samaynta si ay u joojiyaan kana feker hab of it dib u siinayo la midnimada.
thanks for erayo aad
Changeset in Transposh-WordPress [77b28fe]: Saar ah farriimaha xisbiga 3rd dhibsado ka pages admin our, waxtar leh ... August 10, 2018
Changeset in Transposh-WordPress [6bbf7e2]: files update turjumaad August 4, 2018
Changeset in Transposh-WordPress [0688c7e]: magaca Language, ma code August 3, 2018
Changeset in Transposh-WordPress [7a04ae4]: U ogolow saarista filtarrada in editor backend August 3, 2018